> Resource> iTunes> otú nyefee Grooveshark ka iTunes
Grooveshark awade ndị ọrụ ha free online gụgharia song music na onye ọrụ-enyi na enyi interface na oké searchable nchekwa data. Ma eleghị anya, ị na-nnukwu onye ofufe nke Grooveshark music na anakọtara a otutu ngosi-etiri Grooveshark songs gị Grooveshark listi ọkpụkpọ. Ọfọn, otú obi dị gị a obere nkụda mmụọ ma ọ bụ mgbe ị na-ada ha ntị offline?
Nwere ihe echiche nyefee Grooveshark ka iTunes listi ọkpụkpọ maka adaba playback ọbụna ma ọ bụrụ na ị na-agaghị na jikọọ internet? Ma ọ bụ wanna-anọgide na-tọghata Grooveshark ka iPod mere na ị pụrụ ha ntị na ọ laa? Ma ọ bụ ị ga-amasị tọghata Grooveshark ka CD maka oké ọnụ ahịa ichebe.
N'ihi na ihe ọ bụla kpatara, ọ bụrụ na ị chọrọ na-egwu Grooveshark na iTunes, i nwere ike iji Streaming Audio Recorder-enyere gị aka na-aghọta na nyefe. Biko gụọ on na-ahụ a nzọụkwụ-site-nzọụkwụ ndu.
1 Wụnye Streaming Audio Recorder
Ukwu a ngwa dị ebe a. Ị nwere ike ozugbo download ya. Mgbe ahụ, biko wụnye na ẹkedori ya.
Na-abanye a na ngwa isi interface, dị nnọọ see "Record" bọtịnụ na n'elu-akaekpe. Mgbe ahụ gaa Grooveshark playlist, chọta na-egwu onye ị chọrọ Dekọọ. Lee, Streaming Audio Recorder na-Ndekọ song. Ozugbo song na-okokụre, ndekọ ga-akwụsị n'otu oge.
Cheta na: N'oge ndekọ, jide n'aka na Grooveshark song nwere ike igwu were were na e nweghị ọzọ ụda site na kọmputa gị ụda kaadị ma e wezụga ndị na-egwuri egwu Grooveshark song.
3 Nyefee Grooveshark ka iTunes
Chetara dere Grooveshark song na ya n'ọbá akwụkwọ, wee pịa "Tinye ka iTunes" button na ala nke isi interface nyefee Grooveshark ka iTunes.
Ndị na-esonụ nzọụkwụ-site-nzọụkwụ video nkuzi ga ngwa ngwa na-eduzi gị site na.
Ugbu a, gị Grooveshark song bụ ugbua na iTunes. Ịnwere ike ịnyefe Grooveshark ka iPod enweghị ihe ọ bụla nsogbu. Na kwa, ị pụrụ iji iTunes dị ka a free CD burner ka ọkụ gị Grooveshark song ka CD n'ihi na ogologo oge na-echebekwa.
Olee otú Download Pandora Playlist
Olee otú Ekekọrịta Music na iTunes